घर वा उपनगरीय क्षेत्रमा प्रत्येक मालिक जो र पानी समावेश सभ्यता को लाभ, रमाइलो गर्न इच्छा छ। तर, यो विचार यो अवस्थित गर्न तपाईं संचार प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्छ एक सही थियो। पाइप स्थापना पछि तिनीहरूलाई हटाउन आवश्यक हुनेछ। यो गर्न, एक खुम्च्याउने भनिन्छ उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
तर, जो तपाईं जाडो मौसम सुरु अघि पानी सकिन गर्न अनुमति दिन्छ अर्को बाटो छ। यो एक पूर्वाग्रह अन्तर्गत पाइपिंग मा व्यक्त र कुन माध्यमबाट पानी प्रणालीबाट discharged गरिनेछ नल स्थापना गरिएको छ।
मुख्य फाइदा र सेटिङ को बुरा
एकदम अक्सर, आजको उपभोक्ताहरु के सोच छन् त्यहाँ देशमा पाइप उड्ने लागि फाइदा र एक खुम्च्याउने को बुरा। पहिलो बीच विनियोजन गर्नुपर्छ:
अलि कति हल्ला;
पहिलो सुविधा एक प्रभावशाली गति संकेत, यो समाक्षीय ड्राइव कारण छ। यसबाहेक, यस्तो उपकरणहरू तिनीहरूले विशेष casings प्रदान हुनुहुन्छ किनभने, कम हल्ला स्तर मा संचालित। तिनीहरूलाई को एक रिसाव को संभावना छ जस्ता उपकरणहरूको विपक्ष त्यहाँ सानो छ।
कंप्रेशर्स, आफ्नो फाइदा र बेफाइदा को मुख्य प्रजातिहरू
तपाईं देश मा पाइप उड्ने लागि खुम्च्याउने आवश्यक छ भने, तपाईं यस्तो उपकरणहरू को सबै भन्दा साधारण प्रजाति परिचित हुनुपर्छ। सबै भन्दा लोकप्रिय हावा दबाव एक पिस्टन सिलेंडर द्वारा प्रदान भन्ने तथ्यलाई मा निहित सिद्धान्त जो पिस्टन एकाइहरु छन्। यी उपकरणहरू को मुख्य लाभ आफ्नो कम लागत र प्रयोग सजिलो छ। साथै, तिनीहरूले maintainable छन्। को बेफाइदा बीचमा अवरोध बिना सञ्चालन एकाइ क्षमताहरु को प्रभावशाली हल्ला र कमी हाइलाइट गर्न आवश्यक छ। समय समयमा यस्तो प्रविधी बाँकी दिनुपर्छ।
ट्यूब उड्ने लागि भाड खुम्च्याउने स्क्रू प्रयोग गरेर देशमा हावा compresses। यस्तो उपकरणहरू कुनै निकास र सेवन वाल्व छन्। यस्तो कंप्रेशर्स को लाभ बीच स्क्रू एकाइ मा कम हल्ला र कम घर्षण कार्य गर्दछ। यस्तो उपकरणहरू को संचालन मा बिजुली को एक सानो बिट खर्च। यो प्रजाति को बेफाइदा गर्दा घूमएर कंप्रेशर्स संग तुलना विशेष गरी साँचो हो कि एउटा ठूलो मूल्य छलफल गर्न सकिन्छ। अर्को shortcoming आत्म-मरम्मत क्षमताहरु को कमी छ।
बक्र मिसिन सानो आकार मा राम्रो हो, त्यसैले तिनीहरू सजिलै ठाँउ ठाँउ बाट पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। झिल्ली प्रकारको एक पिस्टन रूपमा लचिलो झिल्ली प्रयोग गर्दछ। यी उपकरणहरू को नकारात्मक एक उच्च दबाव सिर्जना को impossibility कार्य गर्दछ। साथै, यस्तो उपकरणहरू को प्रदर्शन एकदम कम छ।
कंप्रेशर्स केही मोडेल को एक समीक्षा: "कैलिब्रे KMK-2300 / 50U"
यो मोडेल 12 400 rubles को एक लागत छ। एक दबाव स्विच को निर्माण समावेश जो यो उपकरण,। जलाशय दबाव 8 पल्ट मा एक महत्वपूर्ण स्तर पुगेपछि यसलाई इन्जिन बन्द लागि जिम्मेवार छ। यो मूल्य6पट्टी उपकरण खस्दा स्वतन्त्र इन्जिन सुरु गर्नुहोस्। लगातार र स्थिर सञ्चालन गर्ने असिन्क्रोनस मोटर द्वारा सुनिश्चित छ। Condensate नाली, छुन मार्फत छ रिसीभर को तल स्थित।
मोडेल को समीक्षा
, देश मा पाइप उड्ने यसको प्रयोगकर्ता अनुसार लागि माथि-वर्णन खुम्च्याउने, धेरै सकारात्मक सुविधाहरू छ:
परिवहन सन्दर्भमा, यो आवास को शीर्ष मा स्थित छ कि एक ह्यान्डल प्रदान गरिएको छ। दृश्य निरीक्षण गरेर दबाव गेज जो तपाईंलाई प्रणाली मा दबाव स्तर निगरानी गर्न सक्छन् सम्भव भएको थियो। यो पनि कम्पन गर्न प्रतिरोध उल्लेख गर्नुपर्छ। यो सुविधा प्रयोगकर्ताहरूले खुट्टा द्वारा सुनिश्चित छ दावी, तिनीहरूले प्रभावकारी कम्पन मनोबल घट्यो। अतिरिक्त लाभ उपभोक्ताहरु विश्वास:
मोडेल को प्राविधिक विशेषताहरु
देश मा ट्यूब उड्ने लागि खुम्च्याउने माथि वर्णन उच्च प्रदर्शन, जो प्रति मिनेट 440 लिटर पुग्छ सहित एक बरु उल्लेखनीय प्रदर्शन, छ। यो शक्ति बारे पनि उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ, यो 2.3 किलोवाट छ। रिसीभर क्षमता 50 लिटर छ।
डिजाइन तेल स्नेहन प्रयोग गर्दछ। उपकरण मात्र 34 किलो वजन। प्रति मिनेट क्रांतियों संख्या पुग्यो 2850. बारम्बारता 50 हर्ट्ज छ। दबाव संचालन 8 पट्टी बराबर छ। विद्युत मोटर बाट संचालित उपकरण।
ओटोमोबाइल खुम्च्याउने ब्रान्ड को सुविधाहरू अवलोकन "विशेष सीपीए-35"
यो उपकरण मात्र 1500 rubles लागत। यो एक कम वजन र आकार, जो कार ट्रंक मा ओसारपसार गर्न अनुमति दिन्छ छ। डिजाइन एक दबाव गेज भनेर दबाव को स्तर नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ लागि प्रदान गर्दछ।
तपाईं ओटोमोबाइल कंप्रेशर्स को देश मा पाइप निस्तब्धता गरिनेछ भने तपाईं एक एकदम उच्च दक्षता छ जो यस मोडेल, विचार गर्न सक्छौं। यो प्रति मिनेट 35 लिटर पुग्छ। शरीर धातु बनेको छ, यो यसकारण विरूपण गर्न subjected र सञ्चालन बेला उपकरणको स्थिरता सुनिश्चित छैन।
सुविधाहरू प्रदर्शन बारेमा समीक्षा
उपभोक्ताहरु सवारीसाधान कंप्रेशर्स को माथि मोडेल विचार गर्दा, तिनीहरू ध्यान दिनुहोस्:
पहिलो सुविधा सन्दर्भमा, यो द्वारा परिवहन ह्यान्डल जो अर्को एक ठाउँ बाट उपकरण सार्न सकिँदैन सुनिश्चित छ। भिजुअल निरीक्षण को लागि, यो एक दबाव गेज प्रदान गरिएको छ, यो दबाव मा परिवर्तन निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपभोक्ताहरु अक्सर, शब्द आफ्नो साथ, यो मोडेल किनभने यो ठूलो अवसर हो, जो उपभोक्ता अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नलिका एक सेट, को उपस्थिति मा व्यक्त प्रदान रुचाउँछु। पाइप उड्ने लागि यो मोबाइल खुम्च्याउने पनि अतिरिक्त लाभ, अर्थात् छ:
भण्डारणको लागि बैग उपस्थिति;
यो पिस्टन avtokompressor प्रति मिनेट 35 लिटर बराबर छ जो एक क्षमता छ। एनालग गेज निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। स्वायत्त सञ्चालन प्रदान गरिएको छैन। प्रणाली दीपक एकाइ वजन मात्र 1.85 किलो छ। उपकरणको आयाम 155x75x140 मिमी हो।
को खुम्च्याउने ब्रान्ड को सुविधाहरू अवलोकन पैट्रियट यूरो 50/260
देश मा पाइप उड्ने लागि यो खुम्च्याउने, जो को मूल्य 7800 rubles छ।, एक इन्जिन, सुरक्षित बाडे संग उपकरण छ। यो जंग र क्षति रोक्छ। रिसीभर यसलाई आफ्नो क्षति समावेश जो एक सुरक्षा तह संग चित्रित, तेर्सो अवस्थित छ। आवास छ कि यो ओसारपसार गर्न सजिलो बनाउँछ एक ह्यान्डल छ।
तपाईं अझै पनि जो मोडेल खुम्च्याउने चयन थाहा छैन भने, तपाईंले माथि वर्णन गरिएको छ कि एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ। उपभोक्ताहरु अनुसार, यो धेरै सकारात्मक सुविधाहरू, तिनीहरूलाई बीचमा खरीदारों विशेष विशिष्ट छ:
क्षति विरुद्ध सुरक्षा;
आन्दोलन को सुख;
पछिल्लो कारक रबर पैड, कम्पन-दर साथ सुसज्जित जो खुट्टा, द्वारा प्रदान गरिएको छ। कि को शीर्ष मा पनि एकाइ को जीवन prolongs छ। देश मा पाइप उड्ने लागि यस्तो खुम्च्याउने ग्राहकहरु को राय मा, अतिरिक्त लाभ को धेरै छ तिनीहरूलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ बीच, सस्तो छ र: प्रकाश वजन, गुणस्तर प्रदर्शन, उच्च दक्षता, अतिरिक्त सेवा कुनै आवश्यक छैन।
एक खुम्च्याउने प्रयोग बिना निस्तब्धता पाइप
को खुम्च्याउने बिना उपनगरीय पानी पाइप पर्जिङ विभिन्न तरिकामा गर्न सकिन्छ। यो विषय पनि हिउँदमा देश मा निवास नगर्ने धेरै homeowners लागि सान्दर्भिक छ। यदि पानी polypropylene ट्यूब, 0.7 मीटर जमीन मा निराश जो प्रयोग गरेर resettled थियो, चिसो को एक संभावना छ।
उदाहरणको रूपमा, विचार एक पाइप 20 मिमी को एक व्यास भएको। तिनीहरूले स्नान गर्न राम्रो देखि राखे छन्। दोस्रो तल्ला मा छ जो मात्रा 0.5 मिटर3भण्डारण समाई छ। अर्को स्नान लागि ताराहरु छ र यो पनि जमीन मा गहिरो जान्छ गर्दा, घर पठाइयो।
पाइप चिसो लाइन को एक गहिराई मा स्थित छन् भनेर कारण को लागि, चिसो देखि आफ्नो ब्रेक को एक उच्च सम्भावना छ। किन जाडो मौसम अघि एक पर्ज पूरा गर्न आवश्यक छ भन्ने छ। उड्ने - यो त्यहाँ दुई खुलने छन् जसमा पुरानो मोडेल, निर्वात गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक अवशोषण, अन्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, यो विधि दुई कमियां छ। तिनीहरूलाई को एक कम दबाव मा व्यक्त गरिएको छ, अन्य - को impossibility नली र पाइप जडानहरू छाप।
तपाईं देशमा पानी को लागि ट्यूब प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, विशेष गरी आवश्यक तपाईँले हटाउन आवश्यक हुनेछ उपकरण रूपमा खोज्नुभयो कंप्रेशर्स हुनुपर्छ,। आज बिक्री मा, तपाईं कंप्रेशर्स को एक विशाल विविधता पाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले पेट्रोल, स्क्रू, घूमएर र कार छन्। गतिशीलता हालैको छ, तिनीहरूले सबैभन्दा सस्तो हो, सबै भन्दा संकुचित आकार र व्यापक उपलब्ध फरक।
थप अंक पाउन सकिन्छ मान जो 8800 rubles बराबर छ मोडेल Inforce PROFline। त्यो तामा windings एक मोटर द्वारा संचालित एक मोडेल छ। रिसीभर को मात्रा प्रणाली अधिभार सुरक्षित छ, सही प्रमाणित र सबैभन्दा टिकाउ को डिजाइन। थप सुविधाहरू बीच सञ्चालन समयमा तेल स्तर को द्रुत जाँच र कम कम्पन आवंटित गर्न आवश्यक छन्।
पानी आपूर्ति लागि accumulators। Accumulator-50
तरल पदार्थ चिपचिपाहट नाप्ने लागि उपकरण। rotational viscometer
"Prozasedavshiesya" कविता को विश्लेषण। Mayakovsky गरेको कविता को विश्लेषण "Prozasedavshiesya"
"Yandex" मा Retargeting: कसरी स्थापित गर्ने र यसलाई कसरी काम गर्छ?
सबै भन्दा राम्रो जीवन-affirming वाक्यांश